रंग विरंग Archives - Page3of 17 - ramechhapkhabar.com
‘केजिएफ २’ ले तोड्यो बाहुबलीको लाइफटाइम रेकर्ड
८ वैशाख, काठमाडौं । दक्षिण भारतीय फिल्म ‘केजिएफः च्याप्टर २’ सफलताका साथ बक्स अफिसमा प्रदर्शन भइरहेको छ। फिल्मले बक्स अफिसमा नयाँ- नयाँ किर्तिमान राखिरहेको छ। भारतीय अखरबार हिन्दुस्तान टाइम्मका अनुसार फिल्मले छैटौं दिनसम्मको कमाइबाट सन् २०१५ मा प्रदर्शन भएको फिल्म ‘बाहुबली’ को लाइफटाइम रेकर्ड...
केकी अधिकारीले सुटुक्कै विवाह गरिन, यी हुन् उनका श्रीमान्
८ वैशाख, काठमाडौं । अभिनेत्री केकी अधिकारी विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छन्। हाम्रोबजार डटकमका सिइओ रोहित तिवारीसँग भोलि (बिहीबार) उनी विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी हुन्। बुधबार केकी र रोहितले मेहन्दी उत्सव मनाएका छन्। पारिवारिक सदस्य र केही साथीभाइबीच दुईले मेहन्दी उत्सव मनाएका हुन्। रोहित...
‘केजीएफ–२’ ले बक्स अफिसमा ल्यायो सुनामी, दुई दिनमा कति कमायो ?
४ वैशाख, काठमाडौं । दक्षिण भारतीय फिल्म ‘केजिएफ २’ले दुई दिनमा नै ३०४ करोड भारतीय रुपैयाँको आम्दानी गरेको छ। पहिलो दिन विश्वव्यापी रुपमा १६५ करोड भारतीय रुपैयाँ आम्दानी गरेको फिल्मले दोस्रो दिनसम्मको प्रदर्शनबाट ३०४ करोड भारतीय रुपैयाँको आम्दानी गरेको छ। गत बिहीबारबाट प्रदर्शनमा आएको...
चर्चित गायिका मेलिना राईले सार्वजनिक गरिन् प्रेमी, को हुन ?
२ वैशाख, काठमाडौं । चर्चित गायिका मेलिना राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो प्रेमी सार्वजनिक गरेकी छन् । प्रेमी सञ्जिब बराइलीसँगको तस्वीर पहिलोपटक फेसबुकमा पोष्ट गरेकी हुन् । मेलिना र सञ्जिव पाँच वर्षदेखि गुपचुप प्रेममा थिए । सञ्जिव नेपालका सर्वाधिक चर्चित र व्यस्त गिटारिस्ट तथा कम्पोजर...
‘बाहुबली २’लाई पछि पार्दै ‘केजीएफ च्याप्टर २’ ले राख्यो पहिलो दिनमै किर्तिमानी
एजेन्सी, २ बैशाख । दर्शकले सर्वाधिक रुचाएका रकी भाइले केजीएफ च्याप्टर २ मार्फत एक पटक पनि स्क्रिनमा आगो लगाएका छन्। फिल्मले हिन्दी लगायत अन्य भाषामा बक्स अफिसमा उत्कृष्ट कमाई गरेर कीर्तिमान बनाएको छ । पहिलो दिनमै यश स्टारर फिल्मले प्रभासको ‘बाहुबली २’ र आमिर...
रणवीर-आलियालाई रणवीरकी पूर्वप्रेमिको यस्तो बधाई आएपछि…
२ वैशाख, काठमाडौं । बलिउडको सबैभन्दा चर्चित जोडी अभिनेता रणवीर कपुर र अभिनेत्री आलिया भट्टको विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन् । बिहिबार मुम्बईको पाली हिल्सको अर्पाटमेन्टमा परिवार सदस्य र केही नजिकका साथीको उपस्थितिमा उनीहरुको विवाह समारोह सम्पन्न भएको हो । रणवीर-आलियालाई बलिउड सेलिब्रिटीहरुले पनि बधाई...
यी हुन राष्ट्रपतिको हातबाट विभुषित हुने कलाकारहरू (सूचीसहित)
२ वैशाख, काठमाडौं । सातौं संविधान दिवसको अवसर पारेर नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा विभिन्न योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले सम्मान गरेको छ। बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कलाकारहरूलाई पदक हस्तान्तरण गरेकी हुन्। वरिष्ठ संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा सुकिर्तिमय राष्ट्रदीप मार्फत विभुषित भएका छन्। यस्तै सुप्रबल जनसेवाश्रीबाट गीतकार...
रियल हिरो पल शाहलाई मिस गरिरहेँ : नायिका पूजा शर्मा
२९ चैत, काठमाडौं । चलचित्र नायिका पूजा शर्माले नायक पल शाहलाई रियल हिरो भन्दै मिस गरिहेको बताएकी छिन् । उनले बक्स अफिस फिल्म अवार्डमा उत्कृष्ट नायिकाको अवार्ड लिएपछि पल शाहलाई आफ्नो अवार्ड समर्पण गरेको समेत भनेकी छिन् । म यस्तो गीत गाउँछु २ बाट...
जेलमा रहेका पललाई उत्कृष्ट नायक अवार्ड, पूजा भइन् भावुक, लेखिन यस्तो स्टाट्स !
२९ चैत, काठमाडौं । नाबालिगलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि तनहुँ जिल्ला कारागारमा थुनिएका अभिनेता पल शाह उत्कृष्ट नायकको अवार्ड जित्न सफल भएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डमा सोमबार आयोजित बक्स अफिस फिल्म अवार्डमा पल शाह फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ मा अभिनयबापत उत्कृष्ट...
अभिनेत्री सुष्मा कार्कीले किन बेचिन आफ्नो फेसबुक पेज ?
२४ चैत, काठमाडौं । अभिनेत्री सुष्मा कार्कीले ९ लाख बढी लाइक भएको फेसबुक पेज बिक्री गरेकी छन्। उनको फेसबुक पेज भेरिफाइड समेत भइसकेको छ। उनको फेसबुक पेजको नाम र युजरनेम परिवर्तन भइसक्दा पनि भेरिफाइड मार्क हटेको छैन। उनको पेजबाट एक अनलाइन मिडियाले समाचार पोस्ट...
« अघिल्ला 12345 … 17 पछिल्ला »